मन्त्री बिष्टले चासो देखाएपछि ‘गोपी’ टिम मख्ख ! | Screennepal
मन्त्री बिष्टले चासो देखाएपछि ‘गोपी’ टिम मख्ख !
२०७५, २५ पुष बुधबारscreennepalfeature, Movie0
नेपाली फिल्म ‘गोपी’माथि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले चासो देखाएका छन् । ‘गोपी’ फिल्मको टिमसँग भेटघाट गर्दै उनले फिल्मप्रति चासो देखाएका हुन् । मन्त्री विष्टले चासो देखाएकापछि फिल्म निर्माण टिम मख्ख परेका छन् ।
Previous Postबलिउड देखि कलिउडमा आउँदा रेवतीको यस्तो हट अवतार, अन्तरवार्तामा खुलाईन सबै रहस्य (भिडियो सहित) Next Postचिसो मौसमलाई चुनौती दिने एउटा भिडियो (भिडियोसहित)